Iyini ihlobo lika-2016 elizoba eRussia, e-Ukraine. Kuyoba yini ihlobo lika-2016: isikhungo sokubikezelwa kwe-hydrometeorological centre
Izibikezelo zezulu zalungisa isimemezelo sokuqala sezulu saseRussia ne-Ukraine ngoJuni-Agasti 2016. Izindaba ezinhle ukuthi kuzo zonke izifunda zaseRussia akukhohlobo olubandayo olubandayo. Isimo sezulu sizohlangana nemigomo yesimo sezulu ngisho nokudlula kancane. Isibikezelo sisekelwe kwizibalo zezulu eminyakeni eyisishiyagalombili edlule. Ngakho-ke ihlobo lika-2016 liyoba njani?
Isimo sezulu ehlobo, esixwayiswe yi-meteorologists, kulindelwe izinguquko ezibukhali, ukungalingani - into engavamile ezinyangeni zasehlobo, kubanda, khona-ke ukushisa. Umbuso wempuphu ngeke ube nokuthula, isomiso siyothathwa indawo yomoya ovunguzayo nemvula. Ukushisa okujwayelekile kuzoba ngama-21-23 degrees emini, ama-13-17 degrees ebusuku.
Kuyini ihlobo lika-2016 eRussia Yini eyofana nehlobo lika-2016 e-Ukraine?
Kuyoba yini ihlobo ngo-2016 eRussia
Ekuqaleni kukaJuni, asikho isidingo sokulinda ukushisa okuqinile, isimo sezulu sizoshintsha futhi singaguquki. Ekupheleni kwenyanga, imishayo ye-thermometer izobonisa ama-20 degrees noma ngaphezulu. Phakathi kukaJuni kuzoba nokuphuza. Lezi zinsuku, izinga lokushisa lomoya lizobamba ama-15-16 degrees, ezindaweni ezisenyakatho zasebusuku zaseRussia ebusuku. Imvula enqabile ngehlobo lemvula.
Kusukela ngoJuni 27, kuzofudumala, eningizimu izofinyelela emazingeni angu-30-32, enyakatho - kuze kufike kuma-25-27 degrees. Ezindaweni eziphakathi kweRussia Federation, umoya uzofudumala kufika ku-29-30 degrees. Kunezimvula ezinkulu nezikhukhula ezinamandla. E-Crimea, azikho ukwehluleka okukhulu okuvela esimeni esivamile sezulu: ngesikhathi semini kulindeleke ukuba kufinyelele ku-degrees 35-37 Celsius, ebusuku - kuya ku-degrees angu-30, izinga lokushisa kwamanzi ogwini lolwandle oluMnyama kunama-23-24 degrees.
Inyanga yokugcina yezinyanga zehlobo ngeke ivele. Ama-thermometer azobonisa ukushisa okungama-20-25. Imvula eningi izodlula, ubusuku buzobe bupholile futhi bude. Esikhathini Esiphakathi kanye naseMoscow ngo-Agasti, izinga lokushisa lokujwayelekile lizoba ngama-22-23 degrees emini, ku-11-13 degrees ebusuku. Njalo ngosuku lwesithathu - izimvula. Ezindaweni zokungcebeleka zaseRussia, u-Agasti kuzofudumala: ukushisa kwamanzi ogwini lwaseCrimea kanye ne-Anapa yizi-22-24 degrees, ku-Sochi - 25-26 degrees.
Kuyoba yini ihlobo lika-2016 e-Ukraine
Ihlobo e-Ukraine lizoshintsha. Ekuqaleni kwenkathi - isimo sezulu esifudumele nemvula, ngoJulayi - ukushisa okungahambi kahle, ngo-Agasti izinga lokushisa lizobonisa ama-27-29 degrees ngaphezu kwe-zero. Ngokuvamile, amanani okushisa kaJuni-Agasti azobekwa emazingeni angama-1-2 ngenhla. E-Kiev ababikezeli besimo sezulu bathembisa ngoJuni kusukela ngo -23 kuya ku-+27 degrees, ngoJulayi - + 26-29 degrees, ngo-Agasti - + 29-30 degrees. Ukushisa kwamanzi ku-Dnieper ehlobo kuzoba ngama-19-22 degrees wokushisa.
Ukuzijabulisa kwe-TOP-5 eCrimea kubantwana
IJordani - izwe lamaqaba kanye nezidumbu
Ukuziqhenya kweSpain: isiqhingi esihle kakhulu saseMedithera saseMallorca
Ukuzila ukudla ngokuzila ukudla - kuyini? Ukupheka okulula futhi okumnandi ngokuzila ukudla "okumile"
I-pizza nama-meatballs, anyanisi ne-parsley
I-Sauerkraut ebusika: zokupheka zakudala ze-jar-3 litre (izindlela ezisheshayo)
Massage Lymphatic iyindlela enhle futhi ewusizo kakhulu
Ukuhlukaniswa ngemva kokuhlubuka
Ukunciphisa kancane noma ucansi okusheshayo?
Ukugula okungenabantwana bokuqala
Ukunakekelwa kwezinyawo, ukuhamba ngezinyawo ekhaya
Isobho seMushroom ngamakhowe
Amafutha abalulekile ekusikeleni isisindo somzimba
Lezi zimpawu zodiacac zizoceba ngo-2018 Izinja